ငွေပေးရပြီးလမ်းမလှတဲ့ကမ်းခြေသားများဘ၀ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ငွေပေးရပြီးလမ်းမလှတဲ့ကမ်းခြေသားများဘ၀
Posted by kyawkyaw11 on Oct 6, 2011 in Copy/Paste | 21 comments
ကျွန်တော်တို့ဂျိတ်တော သံတွဲ ကားလမ်းဟာ ယခင်ကနိုင်ငံတော်က ပြုပြင်
ထိမ်းသိမ်းပြီးတော့လုပ်လာခဲ့တာ ကျွန်တောတို့ တသက်ပါ
ခုတော့ နိုင်ငံတော်က ကမ်းခြေသားတွေကို ညှာတာသောအားဖြင့်
နေလသစ်စာ ကုဏ်မဏီကို လမ်းကိုငှါးရမ်းလိုက်တာ လမ်းတော့မပြင်ဘဲ
ငွေတော့ မှန်မှန်ကောက်ပါတယ် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို သံတွဲ ဂျိတ်တော သွားပြန်ဆိုရင်
400 ကျပ်ပေးရပါတယ် 10 မိုင်ဘဲရှိတာပါ
400 သာပေးနေရတယ် လမ်းကတော့တစ်နေ့ထက်တနေ့ဆိုးဆိုးလာပါတယ်
အောက်က ကုဏ်မဏီတွေက လူထုအကျိုးကို မငဲ့ ငွေကိုသာအဓိကထားတော့
ဒီကိစတွေကို ဖိဖိစီးစီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာကို ကို့တွေ့ခံစားနေရတဲ့ ဂျိတ်တောသားငထွား
က ကမ်းခြေသားတွေကိုစား အမုန်းခံတင်ပြလိုက်ပါတယ်
မိုးများနေလို့ပါတဲ့…မိုးကုန်ရင် လာပြင်ပေးပါမယ်တဲ့…။ ပြောလိုက်ပြီ။
ဟုတ်နိုင်တယ်။တခါလောက်သွားဖူးယုံနဲ့ ရေးမယ်ဆိုရင် မကောင်းဘူး။လိုအပ်နေတဲ့ပြုပြင်ရေးကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။လမ်းရဲ့ အနေအထားက တော်တော်လေး ပျက်စီးနေပေမယ့်. တာဝန်ယူထားတဲ့ နေလသစ္စာကုပ္မဏီအပေါ်မှာ သာတာဝန်ရှိပါတယ်။ကိုယ့်ညီကို က သမ္မတကြီးနဲ့ မဆိုင်တဲ့အသေးအဖွဲတွေပြောနေတယ်။တာဝန်ယူထားတဲ့ နေလသစ္စာကုမ္ပဏီကို တောင်းဆိုကြည့်ပါ။ရွာသားတွေအားလုံးညီညွတ်ရင်စုပေါင်း လုပ်၊လက်မှတ်ထိုးတင်ပြလိုက်ရင် တာဝန်ကျေမကျေ စစ်ဆေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။မေတ္တာဖြင့်……….
ကိုယ်တို့ ကမ်းနားက လူတွေက ပြင်စေချင်ပါတယ်။ကိုယ့်အိမ်ပြန်လမ်းလေးသာစေချင်တာငြင်းမရပါဘူး။ကိုယ်တော့ လမ်းကြေးပေးရတာ၊ဘီးခွန်ဆောင်ရတာ ပြသနာမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေတဲ့ လမ်းကမိုးတွင်းမှာရွှံ့ ဗွက်တွေနဲ့ ချိုင့်ခွက်တွေနဲ့ ။နွေရောက်တော့လဲ ဖုန်ထူထူနဲ့ ။ဈေးသွားဈေးပြန် မြို့တခေါက်တက်ပြန်လာရင် မောလို့ ဆို့ တက်သွားတယ်ဗျာ။
ကျနော်တို့ တင်ဘယ်ဟုတ်ရမှာလဲ. မြို့ ကနေ မြပြင်၊လုံးသာ လာရင် လမ်းကြေးပေးရမှာပါ။ကိုယ့်ဒေသ ကလမ်းတွေတံတားတွေကောင်းဖို့ ပေးကြတာ။ကိုယ်တွေမပေးရင် ဘယ်သူပေးရမလဲ။တခြားပြည်နယ်မှာ သွားတောင်းလို့ ရမလား။စဉ်းစားပြီးပြော၊နားနားပြီးအေးအေးဆေးဆေးတွေးကြည့်စေချင်လို့ ပါဗျာ။
ဘီအိုတီ ဆိုတာ ဘုန်းကြဖို့ ပေးထားတာ။
ဘီအိုတီ ချပေးရင် အရင်လုပ်တာက ဝါးလုံးတန်းပြီး ပိုက်ဆံကောက်တယ်။
ပြီးရင် ရတဲ့ ပိုက်ဆံကို သုံးတယ်။ နည်းနည်းများလာရင် လမ်းကို နည်းနည်း ပြင်ချင်ယောင်ဆောင်မယ်။
ဒီလို လုပ်တာမျိုးတော့ ဆယ်တန်းမအောင်တဲ့ လှေထိုးသားတောင် လုပ်တတ်သေးတယ်။
ရဲထဲမှာ ကင်းစောင့်နေရတဲ့ ရဲဘော်တောင် သွားလုပ်ဆို ဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်။
ကို လင်းဝေကျော် ပြောထားတာလေး လိုက်လျောညီထွေတော့ရှိပါရဲ့မလွန်ဆန်ရဲသူ ကျွန်တော်တို့ ရွာခံတွေပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားလို့ ပါလေ။
တောင်းရင်ပေး၊မသွားရရင် နေဖို့ ဘဲရှိတော့သလားဗျာ။
မပေးနိုင်ဘူးဗျာ။မောင် မိုးဒီတို့ ရွာတလျှောက်လုံး ဟိုတယ်ပေါင်းစုံရှေ့ ကသွားလာနေရတယ်။ဒါပေမယ့် ဟိုတယ်တွေက စုပေါင်းပြုပြင်ထားတဲ့ သူတို့ ရှေ့ ကလမ်းတွေသာ သွားလို့ နည်းနည်းချောတယ်။ချိုင့်တော့ရှိသေးတယ်။နာမည်ကြီးဟိုတယ်ဇုန်ဖြစ်ပါလျှက် ကြည့်ပါမိတ်ဆွေ။Aureum Palace,Bay View,Amata,Silver Beach,PVR,Sandoway ခုလိုဟိုတယ်တွေ ရှိပါလျှက်. လမ်းက ပျက်နေတယ်။ရွာသားတွေအစား အိုးကမပူ၊စလောင်းက ပူပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ခမျာ။
ဘီအိုတီ လုပ်တဲံ့ ကုမ္မဏီတွေက ပိုက်ဆံ အနည်းငယ်ဘဲံ စိုက်ထုတ်ကြပုံ ရပါတယ်.. ပိုက်ဆံတွေကောက် စုပြီးမှပြင်ကြပုံ ရပါတယ်။ နောက် မိုးတွင်းဆိုတော့ ကတ္တရာ မကပ်တဲ့ ဒုက္ခလည်း သူတို့မှာ ရှိသေးတယ်။ နဲနဲ စိတ်ရှည် သည်းခံဖို့တော့ လိုကြပါမယ်။ ဘီအိုတီ လမ်းတွေက နောက်ပိုင်း အစိုးရ ဆောက်လုပ်ရေးတို့ ၊ စည်ပင် လမ်းတို့ထက် သာ လာ တာကတော့ အမှန်ဘဲ။
ဲပြီးခဲ့ တဲ့ ရက်ပိုင်း ပုဂံ သွားတော့ လွန်ခဲ့သော နှစ်များက အခုလိုဘဲ ပိုက်ဆံဘဲ ပေးရပြီး လမ်းလည်းမကောင်းဘူး ဆိုပြီး ညူ စူခဲ့သော လမ်းများ ဟာ တော်တော့်ကို ကောင်းမွနု ပြီး ချိုင့်ခွက်များ မရှိဘဲ စိတ်ချမ်းသာ ခဲ့ ရပါတယ် ။ ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်း၊ မိတ္ထီလာ-ကျောက်ပန်းတောင်း-ပုဂံ လမ်း အားလုံးနီးပါး ကောင်းမွန်လို့ အေးအေးဆေးဆေး မောင်းတာ ထမင်းစားနားချိန်အပါ ၉ နာရီဘဲကြာခဲ့ပါတယ်..
ဟုတ်ပါတယ် အချိန်တစ်ခုလောက်တော့ပေးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ ၊
ဥပမာ… လာမဲ့နွေ အထိ ဆိုရင် မကောင်းဖူးလား ၊
အဲဒီအချိန်ထိ စောင့်နေပီးမှ မပြင်ပေးသေးဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ ဝိုင်းရေးကြရအောင် ။
အားလုံးသူအတွက် ကုမ္ပဏီကပိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ယူသာယူရတာပါ၊သူတို့ လဲ ရှေ့ အစဉ်အဆက်ကပြုပြင်မှုအားနည်းတဲ့လမ်းအပျက်တွေကို
ကိုင်တွယ်ရတော့ နည်းနည်းစောင့်ပေးမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ် ခင်မျာ။
ဒီနှစ်ပွင့်လင်းရာသီမှာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပေါ့ ။ ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာပဲခင်းမလား ။ အပေါက်တွေကို မြေပဲယိုနဲ့ပဲဖို့မလား ။ နှစ်တိုင်းလုပ်သလို ချိုင့်နေရာတွေမှာ မြေစာခဲတွေပဲထုထောင်းထည့်မလား ဆိုတာကို ။ ကုမ္မဏီ ကတော့သိလားမသိလားမသိဘူး ။ သတ်မှတ်ထားတာက ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို တရားဝင်နှစ်ဆယ်ကောက်ရမယ်တဲ့ ခုတော့ ဟီဟိ ဆယ်ဆ ။ ဆိုင်ကယ်တွေလာရင်မောင်တံကြီးအားရပါးရချပြီးစောင့်နေလိုက်ကြတာ တစ်ခါတစ်ခါဆိုမောင်းတံတင်မကဘူးဗျ ။ ဂိတ်ကလူတွေက ဆိုင်ကယ်တွေရှေ့ကပိတ်ရပ်ထားကြတာ ။ ဘရိတ်မမိတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ကျရင်တော့ ပီမိုးနင်းထက်ဆိုးတော့မှာပဲ ။ ဒွတ်ခ ။
မတောင်းလဲပေး၊တောင်းလဲပေး လိုက်ပါ။ကျနော်တို့ ကမညည်းရ၊မြို့ သားတွေကပိုညစ်နေတယ်။
အကြံတခု ပေးပါရစေဗျာ…. မခံချင်စိတ်ကလေးထားပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြုပြင်လိုက်ကြပါလား ..၁၀ မိုင်လောက်ပဲဟာကို..
သံတွဲ တမြိုလုံး စုလိုက်ရင် တလ မှ တမိုင်ပဲခင်းအုံးတော့ တနှစ်ဆိုရင် ပြီးပြီ ..အများသူငါ သွားနေတဲ့လမ်းဆိုတော့ ကုသိုလ်အများကြီးရမှာပေါ့.. ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါလားဗျာ………….
ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်ဖို့ ရာ တော်တော်လေးပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ လမ်းကို သူဌေးကြီးဦးကျောက်တောင်ရဲ့ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူပြုပြင်နေတာဟာလဲ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထစနစ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ဦးစားပေးအနေနဲ့ အနောက်ရိုးမပေါ်ကို ပြုပြင်ရပါတယ်။ပန်းတောင်းမြို့ နယ်မှတောင်ကုတ်မြို့ ထိ ၁၀၆မိုင်ကို ပြုပြင်ပေးနေတာ ခုဆိုရင် သံတွဲနယ်စပ်ထိကို ရောက်နေပါပီ။မြို့ ထဲကနေတောက်လျှောက် ငပလီကမ်းခြေတလျှောက်ကို ဒုတိယဦးစားပေးအနေလောက်နဲ့ ပွင့်လင်းရာသီ နောက်ပိုင်းမှာ အကောင်အထည်ပေါ်လာတော့မှာပါ။လိုအပ်သော လမ်းခင်းကျောက်များ စုဆောင်းခြင်း၊လမ်းတာဘောင်များချဲ့ပေးခြင်း များပြုလုပ်ပေးနေတော့ မိဘပြည်သူများ ဆန္ဒမစောကြစေလိုပါ။ကိုယ့်ညီကို တို့ လဲရောက်တတ်ရာရာလျှောက်မရေးသင့်ပါကြောင်း။
အတိုင်းအတာတစ်ခု ထိစောင့်ကြည့်နေပေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်းထောက်ခံပါသည်။
မပီးခင် ဗမာမမြင်စေနဲ့ စကားပုံ ရှိပါသည်။
မောင်ကြည်တဲ့လား။အလှည့်ပြောင်းတော်တယ်လို့ ပြောရမယ်။အကို့ နာမည် မပြောတော့ပါဘူး။သိနေတယ်လေ …ပို့ စ်နှစ်ခုတင်ထားပြီးခါမှ နာမည်ထပ်ပြောင်းတာ မလုပ်သင့်ဘူး။မျက်လှည့်ပြစားမလို့ လား။အင်းးးး ဟင်းးးးးးးး. သိတယ်. သိနေတယ်။
ကျွန်တော်အတိအကျမေးမြန်းပြီးပါပြီ။ယခုနေလသစာကယူထားတဲ့လမ်းအပိုင်းကိုပြောပြမယ်နော်။ ။ပြည်-တောင်ကုတ်-သံတွဲအပိုင်းမှာတစ်နေ့ကိုကားဖြတ်တာအစီးတစ်ရာမပြည့်ပါဘူး။ အဲဒီတော့သူ့.ရဲ့တစ်နေ့ ၀င်ငွေကိုတွက်ကြည့်လိုက်ပါ။နေ့တိုင်းအရှုံးပေါ်နေပါတယ်။ဦးကျောက်တောင်အနေနဲ့. ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာမြုပ်နှံ ထားတာကျပ်သိန်းပေါင်း(၃၈၀၀)ကျော်သွားပြီလို.သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးကျောက်တောင်က ယခုနေ နိုင် ငံတော် ကရပ်ခွင့်ပေးရင်ဒီအတိုင်းထားပြီးဘာမှမယူဘဲနဲ့သူစိုက်ထားတဲ့ငွေအဆုံးခံပြီးထားခဲံ့မယ် လို့ပြော ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလမ်းကိုဘာဖြစ်လို့လုပ်ရတာလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမတကြီးက ဦးကျောက်တောင်ကိုမင်းကိုယ့်နေရာကိုယ့်ဒေသကိုပြန်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့ဒီလမ်းကိုပြုပြင်ပေးပါ ဆိုလို့ကိုယ့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီလမ်းကိုလေလံပြစ်တဲ့အခါလေလံ ဆွဲမယ့်သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ကျန်တော်တို့ဒေသကိုစေတနာ ထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာကိုကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။ ယခုလမ်းတွေဆိုးနေတာမှန်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်တွေကစုပေါင်းပြီးဦးကျောက်တောင်ကို မေတာရပ်ခံပြင်ခိုင်းရမှာပါ။ကျွန်တော်ဘယ်သူ့.ဘက်မှဘက်လိုက်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်း တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။။။။
ဒီတစ်ခါ တော့ မှန်နေပြန်ရော
ခင်ဗျားတို့က တစ်မြို့လုံး အနေအထားတွေ အကောင်းချည်းပဲ ပြောနေကြတာ
ဒီလိုလေးတွေ ဖတ်ကောင်းအောင် ဗဟုသုတရှိအောင် ရေးပေးနေရင် အားလုံးက
တရားမျှတမှု ဆိုတာ နေရာတိုင်းမရှိနိုင်တာ ခင်ဗျားလဲသိမှာပါ
ဟုတ်တာ မဟုတ်တာ အပထား နာမည်တွေ လျောက်ပြောနေတာတစ်ခုက ခက်နေတာ
စိတ်ထဲမရှိကြပါနဲ့ ။အနစ်နာခံ ပေးသူကို အားပေးကူညီကြပါ။ရေနစ်သူဝါးကူထိုးနေသလို ဖြစ်နေပီမဟုတ်လား ဝေး။